सेक्सका दौरान मानव शरीरभित्र के-के हुन्छ ? (भिडियोसहित)
scheduleआइतवार मंसिर १ गते, २०७६
एजेन्सी । सेक्सका दौरान मानव शरीरमा के-के उतारचढाव आउला ? हाम्रो शरीर कुन-कुन फेजबाट गुज्रिएला ? सामान्यतया मानिसले यस्ता परिवर्तहरु महसुस नै गर्न सक्छन् । तर, यो कस्तो परिवर्तन हो भन्ने थाहा हुँदैन ।
साथै शरीरभित्र के चलिरहेको छ भन्ने कुरा पनि हामी बाहिरैबाट सहजै थाहा पाउन सक्दैनौं । यसैक्रममा सेक्सका दौरान मानव शरीरमा हुने परिवर्तनबारे जानकारी दिने एउटा भिडियो युट्यूबमा भाइरल बनेको छ ।
सेक्सका चार चरण
यस चरणमा मानव शरीरमा सेरोटोनिन (serotonin) रिलीज हुन्छ, जसले तपाईंलाई खुसी दिन्छ । तपाईंको शरीरमा यस दौरान एड्रेनेलिन (adrenaline) पनि रिलीज हुन्छ, जसले तपाईंको हृदय गतिलाई बढाउँछ । यसै चरणमा तपाईंको यौनाङ्गमा रगतको गति बढ्छ, जसले तपाईंलाई सेक्सका लागि पूर्णरुपमा तयार गरिदिन्छ ।
एक्साइटमेन्ट पछिको चरणलाई प्लेट्यू भनिन्छ । यस दौरान मुटुको धडकन बढ्छ, साथै स्वासप्रश्वास पनि तिब्र हुन्छ र मांसपेशीमा ब्लड प्रेशर उच्च बन्छ । सेक्सअघि गरिने किस तथा अन्य फोरप्लेले शरीरमा नोर्पिनेफरिन (Norepinephrine) रिलीज हुन्छ । त्यसपछि तपाईंको यौनाङ्ग थप संवेदनशील बन्दछ ।
यस चरणमा तपाईंको पेल्भिक मसल्स सक्रिय हुन्छ । महिलाको पाठेघर र पुरुषको यौनाङ्ग सक्रिय भएको अनुभूति हुन्छ । नसा र मांसपेशी एक्साइटमेन्टको चरणबाटै सक्रिय थियो, अब यो सबै एकसाथ रिलीज हुन्छ । जसले स्वर्गीय आनन्द अनुभूत गराउँछ । सेक्समा सबैभन्दा आनन्दित हुने क्षण नै यही हो । अक्सिटोसिन लेभल र लभ हर्मन यो अवधिमा आफ्नो चरम बिन्दूमा पुगेको हुन्छ ।
यस चरणमा सेक्सको चाहना हराएर जान्छ । नसा र मांशपेशीमा भएको उत्तारचढाव विस्तारै सामान्य बन्छ । मानिसले रिल्याक्स फिल गर्न थाल्छ । तर, केही महिलाहरु यो चरणमा पनि पुन: अर्गाज्म प्राप्त गर्न सक्छ । तर, पुरुषहरु भने पुन: एक्साइटमेन्टको चरणमा पुग्नै समय लाग्छ । सामान्यता पुरुषहरु एकपटक अर्गाज्म प्राप्त गरेपछि तत्कालै एक्साइटमेन्टमा आउन सक्दैनन् । यसका लागि उनीहरुलाई समय चाहिन्छ ।
यौन सम्पर्कको बेला महिलाले गर्ने १० गल्तीहरु
आँखा पट्टी बाँधेर सेक्स, अभ्यास गर्नुभएको छ ?
सन्तुष्टिका लागि पुरुष यौनाङ्ग कत्रो हुनुपर्छ ? यसो भन्छ नयाँ अनुसन्धान
एक सर्वेको निष्कर्ष, ‘घरमा होइन, त्यहाँ गरिने सेक्स बढी आनन्ददायी’
यस्ता रहेछन् नियमित यौनसम्पर्कबाट महिलालाई हुने फाइदाहरु
यौनका कुरा, कुन उमेरमा सम्भोगको मजा कसलाई बढी ?
तपाईंलाई अचम्भित बनाउन सक्छ सेक्ससँग जोडिएका अध्ययनका यी निष्कर्षहरुले
यस्तो अवस्थामा सेक्स ? सिधै अस्पतालको बास हुनसक्छ
यौन सम्बन्धपछि महिलामा आउँछन् यस्ता परिवर्तन, याद गर्नुभएको छ ?
यौन जीवन, समाचार
बलात्कृत महिला बेहोस् अवस्थामा भेटिइन्
देश, प्रदेश २, यौन जीवन
क्याम्पस अगाडिको खाली चौरमै बालिकामाथि बलात्कार प्रयास
नुहाईदिन्छु भन्दै झाडीमा लगेर नाबालिकामाथि बलात्कार
देश, प्रदेश ५, यौन जीवन, समाचार
स्थानीयको घरमा पसेर प्रहरीद्वारा महिलामाथि बलात्कार
काठमाडौंको बाफलमा १७ वर्षीय किशोरी बलात्कृत
नगरपालिकाका वडाध्यक्षद्वारा २७ वर्षीय महिला बलात्कृत, पुर्पक्षका लागि थुनामा
देश, प्रदेश १, यौन जीवन, समाचार
विवाह नगरेकी युवती बालिकाले बच्चा जन्माइन्
पत्नीलाई यौनसम्पर्क गर्दा पति पक्राउ
कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्ने तयारी भइरहेको छः प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं, १ मंसिर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कालापानीबाट भारतले आफ्ना सेना फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका छन् । हाल भारतीय...
आलमलाई थुन्न आदेश दिने न्यायाधीश ढकालले रौतहट छाडे, कसले दियो धम्की ?
काठमाडौं, १ मंसिर । जिल्ला अदालत रौतहटका न्यायाधीश दिपक ढकाल र जिल्ला सरकारी वकिल खडिन्द्रराज कटवालले रौटहट जिल्ला छोडेका...
आफ्नो भूमिका कम गर्दै ओलीः पोखरेललाई सरकार र दाहाललाई पार्टीको जिम्मा
काठमाडौं, १ मंसिर । आज (आइतबार) सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक बस्दैछ । नेकपाको सचिवालय बैठक प्रधानमन्त्री...
रानु मण्डलको मेकअप कसले गर्‍यो ? सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल जारी
काठमाडौं, १ मंसिर । कुनै समय रेलवे स्टेशनमा गीत गाएर आफ्नो जिन्दगी गुजार्दै आएकी ५५ वर्षीय रानु मण्डल अहिले सेलिब्रिटी बनेकी...
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने ओलीको तयारी
काठमाडौं, १ मंसिर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी गरेका छन् । आइतबार साँझ बसेको सत्तारुढ...
यस्ता छन् नेकपा सचिवालय बैठकको निर्णय
फाइल फोटो काठमाडाैं, १ मंसिर । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले प्रवास समन्वय कमिटी पनि गठन गरेको छ । पार्टीको...
छुरा प्रहार गरी आफ्नै साथीको हत्या
काठमाडौं, १ मंसिर । काठमाडौंमा एकजनाले छुरा प्रहार गरी आफ्नै साथीको हत्या गरेका छन् । शनिबार राति १०ः३० बजे बसन्तपुरमा एकजनाले...
काठमाडौँ, १ मंसिर । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने समाचार अझै पुष्टि हुनसकेन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हटाउने भनिएका...